Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Sustainability News » Na -azaghachi koodu Red Climate ihu igwe ugbu a
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Education • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
SUNx Malta ewepụtala akụkọ kwa afọ nke abụọ ya na njem enyi na enyi ihu igwe tupu ọgbakọ ihu igwe nke Glasgow COP 26. SUNx bụ NGO nke dabeere na EU guzobere dị ka ihe nketa maka ihu igwe na nkwado trailblazer, Maurice Strong.
Nkwupụta ahụ na -egosi mmụba nke ọdachi zuru ụwa ọnụ na etu nke a si emetụta akụkụ njem na njem nlegharị anya nke akụnụba ụwa.
Ọ na -akpọ maka nkwụsi ike ihu igwe ugbu a maka njem na njem.
Nkwupụta ahụ na -akpọkwa maka mbelata nsịpụta na atụmatụ nkwado nke dabere na sayensị, ihu igwe, na ihe ntorobịa chọrọ.
Anyanwux Report na-akpọ maka DASH-2-Zero na-akwado Nkwupụta Njem Nleta Glasgow na nso nso a.
Dabere na data nyocha emere, akụkọ ahụ na -egosi ike nke ọdachi ụwa na -ebute ihu igwe yana otu nke a si emetụta ngalaba njem na njem nlegharị anya nke akụnụba ụwa.
Akụkọ ahụ nwekwara:
Na-akwado Nkwupụta njem nlegharị anya nke Glasgow ma na-agba DASH-2-Zero ume ka ọ were nkwa ndị a mere n'ihu na-atụ aro ebumnuche nke ikuku ikuku carbon dioxide efu maka 2030 na ikuku gas na-enweghị ikuku site na 2050.
Oku maka nkwụghachi ihu igwe ugbu a maka ọrụ Njem & Njem Nleta, yana mbelata ihe ọkụkụ na atụmatụ nkwado nke dabere na sayensị, ihu igwe, na ihe ntorobịa chọrọ.
Na -akọwapụta ọtụtụ ọrụ nkwado dị iji nyere ụlọ ọrụ na obodo aka ịnọ n'ụzọ maka ọdịnihu njem ihu igwe nwere ihu igwe.
Na -enye ya Ndekọ njem njem enyi na ihu igwe ejikọtara na UNGlobal Climate Action Portal iji nyere ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya aka ịdebanye aha ebumnuche ihu igwe na nkwado ma gosipụta ọganihu.
Na -amata mmasị dị mkpa na ọrụ ndị ntorobịa n'ịnagide nsogbu ihu igwe dị adị na ka ndị na -eto eto si enyere aka ịkwalite mgbanwe dị mma gafee ngalaba njem na njem.
Prọfesọ Geoffrey Lipman, Onye isi ala nke SUNx Malta, na Onye isi ala Ndị mmekọ mba ụwa na ndị njem (ICTP), Ọ sịrị, "Ọ bụghị naanị na anyị nwere obi ụtọ ịkwado Nkwupụta Glasgow, mana anyị nwere olile anya na akụkọ njem njem ihu igwe anyị ga -akwalite ezigbo ọrụ na nzaghachi dị mma maka oku Secretary General UN Guterres kpọrọ maka Red Red for Humanity, nke IPCC 6th na -adịbeghị anya gosipụtara. Akụkọ nyocha. Echiche anyị banyere njem enyi na enyi ihu igwe na oku anyị na -akpọ DASH-2- efu nwere ike rụọ ọrụ dị ka ihe mkpali maka mgbanwe ngwa ngwa yana ụzọ e si aga UN 2030/2050 Green na Clean Roadmap maka ọdịnihu ka mma.
“Anyanwụx Malta ewepụtakwala nke ya Ọhụụ afọ iri, nke na -elekwasị anya ụlọ ọrụ 10,000 edebanyere aha na obodo 1000 ka ọ na -erule 2030, yana ndị asọmpi ihu igwe 100,000 iji kwado mgbanwe ahụ ”
Iji budata akụkọ a, pịa ebe a.
SUNx bụ ọgbakọ dabeere na EU, ọ bụghị maka uru, hiwere dịka ihe nketa maka Maurice Strong, ọsụ ụzọ ihu igwe na nkwado na ọkara narị afọ gara aga. Ejikọtara ya na Mịnịsta na -ahụ maka njem nlegharị anya na nchekwa ndị ahịa na ndị na -ahụ maka njem.
SUNx Malta mepụtara 'Green & Clean, Climate Friendly System Sistem' iji nyere ụlọ ọrụ njem na ndị njem na obodo aka ịtụgharị gaa na ọnọdụ ihu igwe ọhụrụ. Ihe mmemme a dabere na mbenata carbon, izute ebumnuche ebumpụta ụwa, yana isonye na ọnọdụ Paris 1.5C. Ọ bụ mmemme na mmụta lekwasịrị anya - na -akwado ụlọ ọrụ na obodo nke oge a iji nyefee ebumnuche ihu igwe ha ma gbaa ndị isi na -eto eto echi ume ịkwadebe maka ọrụ na -akwụghachi ụgwọ n'ofe njem.
Achọpụtara njikọ ọhụrụ n'etiti Alzheimer na ...
Ndị na-eri ihe na-esi ísì ụtọ icheta: Ọrịa cancer na-akpata mmetọ
Chicken Burgers nke Longo chetara ugbu a
Ihe ngosi ọhụrụ na-akwa emo onye ndu China Xi Jinping mepere…
CDC: Nkọwa nke 'ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke' nwere ike ịdị mkpa ...